महान् मानिसहरुको म’स्तिष्क उद्देश्यले भरिएको हुन्छ «
महान् मानिसहरुको म’स्तिष्क उद्देश्यले भरिएको हुन्छ
प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७७, मंगलवार १९:०४
हामी सबैका अनेकौं इच्छा हुन्छन् । कसैलाई सफल हुने इच्छा, त्यसलाई पूरा गर्ने इच्छा र जीवनलाई सार्थक बनाउने इच्छा हुन्छ । उद्देश्यले लगनशील गराउँछ । प्रत्येक दिन तपाई आफैसँग यस्तो प्रश्न गर्नुहोस् — के म आफ्नो जीवनको उद्देश्यको नजिक पुगेको छु ? के मैले संसारलाई बस्नको निमित्त योग्य र उत्तम ठाउँ बनाउन सक्छु वा बनाइरहेको छु ? यसको उत्तर छैन भन्ने आयो भने तपाईँले आफ्नो जीवन ब’र्बाद गर्नुभयो । किनभने जीवन हामीलाई त्यही हिसाबबाट दिइएको छ जस्तो हिसाब हामीले उसलाई दिएका छौँ । हामीले जीवनमा आफ्नो उद्देश्य जति चाँडै खोज्छौँ त्यति नै राम्रो हुन्छ । जब हामी यो खोज्न सफल हुन्छौं तब व्यक्तिगत फाइदा र सामाजिक जिम्मेदारीहरूबीचको सं’घर्षमा एउटा नैतिक सन्तुलन आउँछ ।
यसो गर्दा हामी जागरुक, अझै सक्रिय भई आफ्नो उद्देश्यतर्फ दीर्घकालीन हित हुनेगरी सही निर्णय लिन थाल्छौँ । हामी सबैजना यस धर्तीमा एउटा उद्देश्य लिई आएका छौँ । अर्थात, प्रकृतिले हामीलाई त्यसैगरी पठाएको छ । तर, हामीमध्ये थोरैले मात्र जीवनमा आफ्नो लक्ष्यको पहिचान गर्छन् । धेरै त बाँच्नेमात्र हुन् । तिनले समयलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना दिन गन्छन् । कसैले भनेका छन् — जीवनको बाटोमा हेर्ने क्रममा आफ्नो आँखा लक्ष्यमा केन्द्रित गर्नुहोस् । आँपमाथि ध्यान दिनुहोस् कोयामा होइन । हामीमा उद्देश्य हासिल गर्न सही दिशा, दृढनिश्चय, समयको सीमा, त्यसप्रति समर्पण र अनुशासन भएमात्रै हासिल गर्न सक्छौँ । वासिङटन इरविङले पनि भनेका छन् — महान् मानिसहरुको मस्तिष्क उद्देश्यले भरिएको हुन्छ भने अरु मानिसहरूसँग मात्र इच्छा हुन्छ । झमककुमारी घिमिरेले आफू अ’शक्त भए पनि पढ्ने उद्देश्य लिई आज धेरै साहित्य रचना गरेर हामीबीच प्रेरणाको पात्र बनेकी छिन् ।
हामीले जिन्दगीमा आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्दा निकै चुनौतीको सामना गर्छौं । त्यस्ता चुनौतीलाई अवसरको रुपमा स्वीकारी अघि बढ्यौँ भने उद्देश्य हासिल हुन्छ । लायड जोन्सले भनेका छन् — केही गर्ने प्रयत्न गरेर असफल हुने मानिसहरु ती मानिसहरु भन्दा लाखौं गुना राम्रा हुन्छन् जो केही पनि नगरीकन सफल हुन्छन् । लक्ष्यलाई सानो सानो भागमा बाँड्न सके हासिल गर्न सजिलो हुन्छ । हामी जुनसुकै उमेरको भए पनि उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोट भए त्यो पक्कै पनि पूरा हुन्छ । जिन गार्डोनले पनि भनेका छन् — जीवनमा लामो पाइला बढाउन मुस्किल होला तर एक एक इन्च गरी बढाउन त सजिलो हुन्छ । सबैभन्दा पहिले उद्देश्य हासिल गर्न चाहिने वस्तु हामी स्वयं नै हौँ । हाम्रो उद्देश्य हासिल गर्ने गन्तव्यको यात्रु हामी नै हौँ । त्यसकारण निरन्तर प्रयास र असफल हुँदा ग’ल्तीहरुबाट सिकी कहिल्यै हरेस नखाए हामी सबैले आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्नेछौँ ।
‘श्री ५ बडामहाराज खुशी हुनुभयो, हामीलाई आममाफी मिलेछ !’
काठमाडौँ: नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूलाई माफी दिएको प्रसंगलाई